ခိုးစားရသောအရသာ – မြန်မာသတင်းစုံ
Posted on March 2, 2021 Author admin	Comments Off on ခိုးစားရသောအရသာ
ဦးသောင်းဆက်သည် အသက်ကြီးကာမှ ဟန်းဆက် ကိုင်ဖူးသူဖြစ်သည်။ ဦးသောင်းဆက် အရွယ်ကောင်းစဉ်… ငယ်စဉ်အခါက… ယခုကဲ့သို့တယ်လီဖုန်းကို… ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်… ပေါပေါများ များမသုံးနိုင်ကြချေ ။ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများသာ… အိမ်ဖုန်း ကြိုးဖုန်း သုံးကြသည်။ ယခုတော့… ဦးသောင်းဆက်လည်း တတ်နိုင်သလောက်သောငွေလေးဖြင့် ဟန်းဆက် ဈေးပေါပေါလေးတစ်လုံးဝယ်ကိုင်ဖြစ်လေသည်။ အခြားသူများကဲ့သို့ ဟန်းဆက် ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးမပြုတတ်သော်လည်း… ဟိုကလိ ဒီကလိဖြင့် ဖေ့ဘုတ် ပွတ်တတ်လာသည်။ အပြာဆိုဒ်/အပြာစာများကို ရှာဖွေကြည့် ရှု့တတ်လာသည်။ အိမ်ရှိဇနီးဖြစ်သူမှာ ရိုးရိုးအေးအေးဖြစ်သည့်ုပြင်… အသက်အရွယ်ကြီးမြင့်လာသောကြောင့်… ကိစ္စတွင်ဆက်ဆံမှုမရှိသလောက် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်… ဦးသောင်းဆက်မှာ… ဟန်းဆက် မှ အပြာကားတွေကြည့်ပြီးသည့်အခါ… စိတ်ဖြေစရာမ ရှိသည့်အတွက် … ။
အသက်ကြီးကာမှ လက်သ္မားပြန်ဖြစ်နေရလေသည်။ အပြင်တွင် ကာမသွားရောက်ဖြေဖျောက်ရလောက်အောင်လည်း… ငွေကြေးတတ်နိုင်သူမဟုတ်ချေ။ ကံကောင်းချင်လို့လား? ကံဆိုးချင်လို့လား? မသိ…ဇနီးဖြစ်သူ၏တူမထံမှ… ဟန်းဆက်အဟောင်းတစ်ခုရရှိလာသည်။ ထိုအခါကျမှ… ဦးသောင်းဆက်သည်… မျောက်အုန်းသီး နှစ်လုံးရသလိုဖြစ်ကာ… ဟန်းဆက်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့(ရှယ်) တော့သည်… သီချင်းတွေ (ရှယ်)၏။ ဓာတ်ပုံတွေ(ရှယ်)၏။ အောစာတွေ အောရုပ်ပြတွေ (ရှယ်)၏။ (ရှယ်)မတတ်တော့ မလိုအပ်သော အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ… ဟန်းဆက်များထဲသို့… အနှီ(ရှယ်)သမျှ ရောက်ရှိကုန်တော့သည်။ ဤသည်ကို ဦးသောင်းဆက်သိသလားဆိုတော့ မသိပါ… လုံးလုံးကိုမသိပါ… (ဘလူးတွတ်) တွေဖွင့်ကာ… (အင်တာနက်)တွေဖွင့်ကာ (ရှဲ)သည်။ ဦးသောင်းဆက်အိမ်၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်နေသော မကြူကြူမှာ ကလေးနှစ်ဦးရှိသည့် အိမ်ထောင်သည်တစ်ဦးဖြစ်လေသည်။
ယောက္ခမအိမ်တွင်နေရသူလည်း ဖြစ်သည်။ ယောက္ခထီးတော့မရှိတော့ချေ။ ဦးသောင်းဆက်မှာ ဇနီးဖြစ်သူချက်ပြုတ် ကျွေးမွေးသည်များကို ငြီးငွေ့လာသည့်အခါ… ကိုယ်တိုင်ဈေးသွားပြီး… မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဝယ်ယူကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်စားတတ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ဈေးသွားသည့်အခါ… ကြူကြူနှင့်လမ်းတွင် မကြာခဏဆုံတတ်သည်။ ထိုသို့ဆုံသည့်အခါ အသက်ကြီး၍ လမ်းလျှောက်နှေးသော ဦးသောင်းဆက်ကို ကြူကြဓက မင်္ဂလာပါဟု နှုတ်ဆက်ကာ ကျော်တက်သွားတတ်သည်။ ဦးသောင်းဆက်သည် ကျော်တက်သွားသော ကြူကြူ၏ နောက်ပိုင်းအလှကိုကြည့်ကာ… တဏှာစိတ်မွန်တော့သည်။ ကြူကြူကား ကလေးနှစ်ယောက်အမေ ဖြစ်သည့်ပြင် အရမ်းချောမောသူတစ်ယောက်လည်း မဟုတ်ပါ။ အသားအနည်းငယ်ညိုကာ တင်အနည်းငယ်ကားပြီး… နောက်သို့ နည်းနည်းကောက်သည်။ ရင်အစုံကလည်း ရှိသင့်သလောက်သာရှိသည်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဦးသောင်းဆက်အတွက် အနီးအနားမှာ ပြစ်မှားဆို၍ကြူကြူနှင့် ကြူကြူယောင်းမ တင်တင်တို့သာရှိသည်။ ကြူကြူယောင်းမ တင်တင်ကတော့… အိမ်ထောင်ပျက်တစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ကြူကြူလိုပဲ ကလေးနှစ်ဦးရှိသော်လည်း အိမ်ထောင်ပြိုကွဲသောအခါ… ကလေးနှစ်ဦးကို ယောက္ခမဖြစ်သူများက ခေါ်ယူမွေးစားလိုက်သဖြင့် … လူလွတ်တစ်ဦးဖြစ်နေလေသည်။ တင်တင်သည် ကြူကြူလို အသားမညိုပဲ… အနည်းငယ် အသားလတ်သည်။ တင်တင်၏ ထူးခြားချက်ကတော့ အရပ်မြင့်သလို ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ထွားသည်။ စွင့်ကားတင်းမောက်သော အိုးကြီး ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ရင်ကလည်း တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့်ဖြစ်သည်။ မို့မောက်ပြီးကြည့်ကောင်းလှသည်။ အိမ်ထောင်ပျက်ဖြစ်သောကြောင့်… အိမ်တွင် မိခင်ဖြစ်သူနှင့် အဆင်မပြေလှချေ ။ လောလောဆယ်တွင်လည်း (ကုလား) တစ်ယောက်နှင့် သတင်းထွက်နေသေးသည်။
ဦးသောင်းဆက်၏ဇနီးဖြစ်သူသည်… သင်္ကြန်မကျမှီ (၁၀)ရက်လောက်အလိုကပင်… မွေးရပ်မြေသို့ ဥပုတ်သီလဆောက်တည်ရန်အတွက် ပြန်သွားချေပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်… ဦးသောင်းဆက်မှာ တစ်ယောက်တည်း လွပ်လွပ်လပ်လပ်အော များကြည့်လိုက်… ဟန်းဆက်မှအောစာ များဖတ်လိုက်ဖြစ်… အခါကြီးရက်ကြီးကို အကုသိုလ်များဖြစ် ဖြတ်သန်းနေတော့သည်။ ကြူကြူနှင့် တင်တင်တို့ကို… စားချင်ဝါးချင်သော်လည်း အရိုးစူးမှာစိုးသဖြင့်… အငွေ့စားသုံးပြီး… လက်သမားဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေတော့သည်။ သင်္ကြန်နားနီးလာသော်… ဦးသောင်းဆက်အိမ် ဝဲ/ယာရှိအိမ်များမှလူများသည်လည်း… နယ်သို့ခရီးထွက်သွားကြသူများနှင့် ဥပုတ်သီလ ဆောက်တည်သူများဖြစ်ကြသဖြင့်… ဦးသောင်းဆက်၏ အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေသည်။ သင်္ကြန်အကြိုနေ့တွင်… တင်တင်သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်အိမ်မှ… မုန့်လုံးရေပေါ် အလှူလုပ်သဖြင့်… သွားရောက်ကူညီလုပ်ကိုင်လေသည်။
ထိုအချိန်တွင်… ဦးသောင်းဆက်သည် နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်တံခါးနှင့်ပြူတင်းပေါက်များကို ပိတ်ထားသည့်အပြင် အိမ်ရှေ့တံခါးမကြီး တစ်ချပ်သာ ဖွင့်ထားပြီး ဟန်းဆက်ပွတ်နေသည်။ အပြာကားမကြည့်ရသေးသည်များ တွေ့ရှိက… ဒေါင်းလုပ်ဆွဲကာ ကြည့်လိုက်သေးသည်။ ယခု ဦးသောင်းဆက်ကြည့်နေသောကားမှာ လူနှင့်ခွေးဆက်ယှက်သောကားဖြစ်သည်။ ဦးသောင်းဆက်မှာ လူအမျိုးသမီးးနှင့် ခွေးဆက်ယှက်ခြင်းကို ယခုမှသာ မျက်ဝါးထင် ထင်မြင်တွေ့ရသဖြင့်… အထူးစိတ်ပါဝင် စားနေသည်။ ပုဆိုးအောက်မှလိင်တန်မှာလည်း မာကြောတောင့်တင်းကာထိပ်ဝတွင် အရည်ကြည်ပင် စို့ထွက်လာသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ မဝတ်ထားသဖြင့် လီးကို တခါတရံအုပ်ကိုင်ဂွင်းဆောင့်မိတတ်သေးသည်။ ထိုအချိန်တွင်ခြံဝမှ… “အိမ်ရှင်တို့…အိမ်ရှင်တို့… ဘယ်သူမှမရှိဘူးလား.. ဒီမှာ မုန့်လုံးရေပေါ် လာဝေပါတယ်ရှင်…” ဦးသောင်းဆက်သည် ရုတ်တရက် ထိုင်ခုံထရန်ပြုစဉ်။
အနည်းငယ်ခါးမျက်သလို ဖြစ်သွားသဖြင့်… “ဟေး…ဘယ်သူလဲ .. ရှိတယ်ဟေ့… ဒီမှာခါးမျက်သွားလို့… ထလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်… ဝင်လာခဲ့ဟေ့…”။ တင်တင်လည်းအိမ်အတွင်းသို့လှမ်းကြည့်ပြီး… ခြံတံခါးဖွင့်ကာအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့တော့သည်။ အိမ်အတွင်းရောက်သောအခါ… အော်…ဦး…ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ… တော်တော်နာနေလား..” “ကိစ္စမရှိပါဘူး သမီးရယ်…ရုတ်တရက်အထမှာ ခါးနဲနဲမျက်သွားတာပါ…” ဒီမှာ…ဦး…မုန့်ဝေခိုင်းလိုက်လို့မုန်လာပို့တာ… ဦးမထ,နိုင်ယင်နေလေ…သမီးဖါသာ နောက်ဖေးမှာ သွားလှယ်ထည့်ထားခဲ့မယ်နော်…” တင်တင်သည် ပြောဆိုပြီးသည်နှင့်အိမ်နောက်ဖေးသို့ ထွက်သွားလေသည်။ တဏှာကြောတင်းနေသည့် ဦးသောင်းဆက်သည် တင်တင်၏ဖင်လုံးကြီးများကို ကြည့်ယင်း စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ကာ… နောက်ဖေးသို့ ထလိုက်သွားလေတော့သည်။ နောက်ဖေးပုဂံစင်တွင် မုန့်လှယ်ရန်ပုဂံရွေးနေသော… တင်တင်၏ အနောက်တွင် ဝင်ရပ်ယင်း…။
“သမီး…ဟိုကြွေပုဂံထဲကိုလှယ်လိုက်လေ…” ဟုပြောယင်း…တင်တင်၏အိုးကြီးကို လိင်တန်ကြီးဖြင့် ထောက်မိလေသည်။ တင်တင်လည်း ရုတ်တရက်ဆိုတော့… လန့်သွားပေမဲ့… အတွေ့အကြုံရှိသူပီပီ မိမိဖင်တွင် ကပ်နေသော ပူပူနွေးနွေးအချောင်းကြီးသည် ဦးသောင်းဆက်၏ လီးကြီးဆိုသာ သဘောပေါက်မိသည်။ ဦးသောင်းဆက်သည် မိမိအိမ်အတွင်း မရောက်ခင်ကတည်းက… (ဖုန်း)အတွင်းရှိ မဟုတ်မဟတ်များကိုကြည့်ကာ စိတ်ထနေခြင်းဖြစ်မည်… ယခု မိမိရောက်လာသည့်အခါ မိမိအဖုတ်ကိုလိုးလို၍ နောက်ကနေ လာထောက်ခြင်းဖြစ်မည်။ မိမိနှင့်ဖြစ်နေသော(ကုလား)နှင့် အလိုးမခံဖြစ်သည်မှာလည်း ကြာပြီဖြစ်သော ကြောင့်လည်းကောင်း… အဖိုးကြီး၏ လီးအရာသာကိုလည်း သိချင်သောကြောင့် လည်းကောင်း… မိမိဖင်တွင်ကပ်နေသည့် ဦးသောင်းဆက်၏ လီးကြီးကြောင့်… အဖုတ်အတွင်းတွင် ရှေ့ပြေးသုတ်ရည်များ ထွက်လာသည်။
အို…ဦး…ဖယ်ပါ…တစ်ယောက်ယောက် ဝင်လာယင် မြင်သွားပြီး…အကုန်ရှုပ်ကုန်လိမ့်မယ်… “အေးပါ…သမီးရယ်…သမီးလက်ဆေးလိုက်အုန်းလေ…” ဦးသောင်းဆက်သည် ပြောပြီး…တင်တင်ကို ခါးမှကိုင်ကာ… (ဘေစင်)ရှိရာသို့ ဆွဲလှည့်လိုက်သည်။ ဆွဲလှည့်လိုက်သည့်အရှိန်ကြောင့်… လီးနှင့်ဖင်မှာ ပွတ်တိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပြီး… နှစ်ဦးစလုံး၏ ကာမစိတ်ကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့သည်။ “အာ…ဦး…လွှတ်ပါဆိုကွာ…” တင်တင်သည်(ဘေစင်)တွင်လက်ဆေးယင်း… နွဲ့လိုက်သေးသည်။ “သမီးကလဲကွာ…ဘယ်သူမှမလာပါဘူး ဒီဖက်လှည့်ပြီး… အဲဒီရေခဲသေတ္တာလေးပေါ် လက်ထောက်ပြီး… အိမ်ရှေ့ကိုကြည့်လိုက်… ဘယ်သူမှ မလာပါဘူးကွ……” ဦးသောင်းဆက်သည်ပြောယင်းနှင့်ပင်တင်တင်ကို ရေခဲသေတ္တာဆီသို့ဆွဲလှည့်လိုက်ပြန်သည်။ တင်တင်သည် ဦးသောင်းဆက်၏ ဆွဲလှည့်မှုကြောင့်… ရေခဲသေတ္တာလေးပေါ်ကို လက်ထောက်ထားလျက် ဖင်ကိုနောက်သို့ မသိမသာပိုပစ်ပေးမိပြီး…။
ခြေကိုလည်း အနည်းခွင်ထားလိုက်သည် … “မသင့်တော်ပါဘူးဦးရယ်…မလုပ်ပါနဲ့နော်” ” ခဏလေးပါသမီးရယ်… ဦးစိတ်တွေ တစ်အားလာနေလို့ပါ…” ဟု…ဦးသောင်းဆက်ပြောလျက်ကပင်… တင်တင်၏ထမိန်ကို ခါးပေါ်ဆွဲလှန်တင်ကာ… ပုဆိုးကိုလည်း ချွ တ်ချ ၍… အဖုတ်ဝ,သို့ လီးတေ့ပြီး ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ “အ…ဦး…ဘယ်…ဘယ်လိုမှကိုပြောလို့ မရဘူးကွာ… အို့…အို့… အင်း… ဗြစ်…ဖွတ်…ဖွတ်…” တင်တင်၏အဖုတ်အတွင်းတွင်ရှေ့ပြေး သုတ်ရည်ကြည်ထွက်ထားသောကြောင့် ချောဆီကဲ့သို့ဖြစ်ကာ… ဦးသောင်းဆက်၏ လီးကြီးသည် တင်တင်အဖုတ်နံရံကာ မ,ဖုလေးများကို ပွတ်တိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့ချေပြီလေ။ “အား…အား…အိုး…ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ… ခွေးလိုးသလို… နောက်ကနေအတင်းကို ဆောင့်လိုးနေတော့တာပဲ… ဘယ်တုန်း ကတည်းက… ငတ်ပြတ်နေလဲ မသိပါဘူးနော်…” “အင်း…ဟင်း…ဟင်း… သမီးကိုလိုးချင်နေတာ ကြာလှပြီကွာ…။
သမီးဖင်ကြီးကိုပဲ… ဦးမျက်စိထဲမှာ… အမြဲ မြင်နေမိတယ်… ကောင်းလိုက်တဲ့စောက်ဖုတ်… အမွှေးတွေကလဲ အများချည်း… စောက်ဖုတ်ကလဲ… အကြီးကြီးပဲ…” ဗြွတ်…ဗြစ်…ဗြစ်…ဖွတ်…ဖတ်…ဖတ်… “အ …အဟင်းဟင်း …အိုး……” ဟု…ညည်းကာ…တင်တင်သည်ဖင်ကြီးဝှေ့ယမ်းလျက် သုတ်ရည်များထွက်ကာ တစ်ချီပြီးလေသည်။ ဦးသောင်းဆက်သည်လည်း… ဖင်အိုးကြီးအပေါ် အသာမှေးထားယင်း… တင်တင်၏… နို့နှစ်လုံးကို အင်္ကျီပေါ်ကနေ လှမ်းကိုင်နယ်ဖတ်လိုက်သည်။ “ဦး…ဇိမ်ဆွဲမနေနဲ့လေ…ပြီးအောင်လိုးတော့လေ…ှီု ဦးသောင်းဆက်လည်းသက်လုံပြန်ကောင်းလာသည်နှင့်အညီ ကြည့်ထားသော လူမိန်းမကို ခွေးလိုးကားလို… ဦးသောင်းဆက်သည် တင်တင်၏ခါးတစ်ခွင်ကိုကိုင်ကာ… ခွေးလိုးသကဲ့သို့ဆောင့်ဆောင့်လိုးလေသည်။ လိုးနေယင်းတင်တင်၏စအိုကိုကြည့်မိရာ… စအိုသည် (ပါကင်)မဟုတ်တော့ကြောင်း ကိုရိပ်မိလိုက်သည်။
သည်မျှလောက်ကြီးသည့် တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ရှိသည့်… စအိုပေါက်ကိုပါ… ဦးသောင်းဆက် လိုးချင်မိသည်။ ထို့ကြောင့် ညာလက်ခလယ်ကို တံတွေးစွတ်ကာ… ဖင်ပေါက်ကိုကလိလေသည်။ “အို့…ဦး…ဦး…နှိုက်ပါရှင်…သမီးဖင်ထဲကို လက်ချောင်းဝင်ထိုးထဲ့ပြီးနှိုက်ပါရှင်… အား…ရွှီး… ကောင်း…ကောင်းတယ်…” စောက်ဖုတ်နှင့်ဖင်စအိုပါအရသာကောင်းနေသဖြင့်… တင်တင်သည်နောက်တစ်ချီပြီးလုပြီးခင်ဖြစ်လာသည်။ ထိုအချိန်တွင်ဆောင့်အားပြင်းပြင်းဖြင့်… ဆောင့်လိုးရသောကြောင့်…ဦးသောင်းဆက်၏ သုတ်ရည်ပူပူနွေးနွေးများသည် တင်တင်အဖုတ်အတွင်းသို့… နွေးကနဲ… နွေးကနဲ တိုးဝင်ရောက်သွားချေပြီ… “အို…ဆက်ဆောင့်… ဆက်နှိုက်ထားပါအုံးရှင်… သမီးပြီးကာနီးပြီ… အ…ကောင်း… ကောင်းလိုက်တာရှင်…” တင်တင်လည်းနောက်တစ်ချီ ထပ်ပြီးကာ… ဖင်ကြီးကိုနောက်ဝှေ့ယမ်းလျက် လီးအရသာ မှိန်းခံနေသည့်ပြင်… ။
စအိုအတွင်းသို့ လက်ချောင်းဖြေးညင်းစွာ ထိုးသွင်း …. ထုတ်နေမှုကိုလည်း… သဘောကျနှစ်ကြိုနေမိသည်။ “ဦး…ဖယ်တော့နော်…သိပ်ကြာနေယင်… လူတွေ… မယုံသင်္ကာဖြစ်ကုန်မယ်…” ပြောပြီး… ဦးသောင်းဆက်ဖက်သို့လှည့် လိုက်သဖြင့်… အဖုတ်မှလီးကျွတ်သွားသလို ဖင်စအိုမှ လက်ချောင်းလည်း ကျွတ်သွားခဲ့လေသည်။ “သမီး …ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီးဆေးလိုက်လေ…” တင်တင်ရေချိုးခန်းအတွင်းမှ ပြန်ထွက်လာသည့်အခါ… “မဝသေးဘူး သမီးရယ်…အခြေအနေပေးယင် နောက်တစ်ခေါက်လာခဲ့ပါအုံးလား……” “အင်း…ဦး…လာလို့ရယင်လာခဲ့မယ်…သွားမယ်နော်…” တင်တင်ထွက်သွားမှဦးသောင်းဆက်လည်း ရေချိုးခန်းဝင်၍ ရေချိုးသန့်ရှင်း ရေးပြုလုပ်လေသည်။ ရေချိုးပြီးသည့်အခါ… ကုလားထိုင်တွင် ထိုင်ကာအနားယူယင်း… တင်တင်၏ အဖုတ်ကြီးနှင့်ဖင်အိုးကြီးများကို မျက်စိတွင် ပြန်လည်မြင်ယောင်နေသည်။ တင်တင်၏ အဖုတ်သည်ကြီးသကဲ့သို့ စောက်မွေးလည်း တော်တော်ထူသည်။
ဖင်အိုးကြီးတွေကတော့ရှယ်ပဲ…ဟု… ဦးသောင်းဆက် စားမြို့ပြန်နေသည် တင်တင်ပြန်လာခဲ့သည်ရှိသော်… ထပ်လိုးနိုင်ရန်အတွက် အားဆေးပင် ထသောက်လိုက်သေးသည်။ ကုလားထိုင်ပေါ်နားနေစဉ် မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားလေတော့သည်။ အိပ်မက်များပင်မက်၍ အိပ်မက်အတွင်းဝယ် တင်တင်၏ဖင်စအိုကိုပင် လိုးနေလိုက်သေးသည်။ အိပ်ယင်းပင်လီးမှာ ထတောင်နေတော့သည်။ “ဦးလေး…ဦးလေး…ဟင်…ဒီအချိန်ကြီး အိပ်ပျော်နေလားမသိပါဘူး… အိမ်ထဲထိ ဝင်ကြည့်လိုက်တော့မယ်…” ကြူကြူအိမ်အတွင်းသို့ ရောက်သည့်အခါတွင်… မြင်လိုက်ရသည့်မြင်ကွင်းကြောင့်… ဆွံ့အသွားမိသည်။ ဦးသောင်းဆက်သည် ပက်လက်ကုလား ထိုင်ပေါ်တွင်ခြေဆင်းလျက်… ပလပ်စတစ် ခွေးခြေလေးပေါ်တွင်… ခြေအစုံတင်ကာ အိပ်ပျော်နေ၏။ သို့သော် လူကအိပ်နေသော်ငြား လီးကတော့… ပုဆိုးအောက်တွင် ထောင်မတ်နေလေသည်။
‘အို…ဒီလူကြီးကလဲ… လူကသာအိပ်နေတာ… လီးကတောင်နေတော့… ငါ့(ဖုန်း)ထဲမှာလဲ… ဒီလူကြီး(ရှဲ)ထားတဲ့(အော) ကားတွေအများကြီးပဲ… ဒီလူကြီးအိပ်မက်ထဲမှာ ဘယ်သူနဲ့တွေ့နေလဲမသိဘူး (အော)ကားထဲက… ကပ္ပလီမက ကပ္ပလီလီးကို စုတ်ပေးသလိုစုတ်ချင်လိုက်တာ… အဖုတ်တောင် ယားလာပြီနော်…’ ကြူကြူသည် လီးကြီးကိုတပ်မက်စွာ… ကြည့်နေသည်ကို… ဦးသောင်းဆက်နိုးလာလျှင် သိသွားမှာစိုးရိမ်သဖြင့်… မျက်နှာလွဲကာ နောက်ဖေးမီးဖိုချောင်သို့သွားရန် ပြင်လိုက်သည်။ အမှတ်တမဲ့ ဦးသောင်းဆက်ခြေတင်ထားသော ပလပ်စတစ်ခွေးခြေပုလေးကို တိုက်မိလိုက်သည်။ ဦးသောင်းဆက်လန့်နိုးလာသဖြင့်… “ဟို…ဟို…ဦး…သမီးလေအိမ်ရှေ့ကနေ အော်ခေါ်သေးတယ်… ထူး…ထူးသံမကြားလို့ ဝင်လာလိုက်တာ…သ…သမီးတို့အိမ်… အိမ်ကလေ… ကြာဇံချက်ပို့… ပို့ခိုင်းလိုက်လို့… သ…သမီး… နောက်ဖေးမှာ… သွား… သွားလှယ်လိုက်မယ်နော်”။
ကြူကြူသည် သူခိုးလူမိသလိုဖြစ်သဖြင့် အထစ်ထစ် အငေါ့ငေါ့ဖြစ်ကာ… ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြင့် နောက်ဖေးဖက်သို့ ထွက်သွားလေသည်။ ဦးသောင်းဆက်လည်း သဘောပေါက်သွားပြီး… ကြူကြူပန်းကန်စင်အနီးသို့ ရောက်ချိန်ကိုမှန်းကာ… ထလိုက်သွား၏။ ကြူကြူပန်းကန်လှယ်နေချိန်… လက်မအားဖြစ်နေသည်ကို… အခွင့်ကောင်းယူကာ… ခါးဖက်ပြီး ဖင်ကိုလီးဖြစ်ထောက်လေတော့သည်။ “အို…ဦး…မသင့်တော်ဘူးနော်…သမီးမှာလဲ… ကလေးတွေနဲ့…ဦးမှာလဲအန်တီနဲ့…” “အဲဒီ…အန်တီကမကျွေးတော့ဘူးကွာ…ဦး… ငတ်နေတာကြာပြီ… ” အဟင်းဟင်း… အဲဒီတော့ ဦးကသမီးဆီက တောင်းစားချင်တယ်ပေါ့…” “အင်း…တစ်ချက်နှစ်ချက်လေးပါ…” “အမလေး…ယုံမယ်အားကြီး…” “လုပ်ပါသမီးရာ…” ဦးသောင်းဆက်သည် ပါးစပ်ကပြောနေသော်လည်း… လက်က အငြိမ်မနေချေ… နောက်မှနေ၍ နို့အုံလှမ်းကိုင်ပွတ်ခြေယင်း… လီးကလည်း ဖင်ကိုပွတ်ဆွဲနေ၏။
ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်၏ အထိအတွေ့ ကြောင့်… ကြူကြူအဖုတ်အတွင်းတွင်… သုတ်ရည်စိမ့်ထွက်လာသည်။ “ဟာ…ဦး…မဖြစ်ဘူး…လူဝင်လာယင်…မိကုန်လိမ့်မယ်…” “သမီးရယ်…လူဝင်လာယင်မြင်ရအောင် ဟို… တံခါးပေါက်ဘေးက ရေခဲသေတ္တာမှာ လက်ထောက်လိုက်ပါလား…” ဦးသောင်းဆက်သည် ကြူကြူ၏ ယောင်းမတင်တင်ကို လိုးသလိုလိုးရန် နေရာပြင်လိုက်သည်။ ကြူကြူသည်လည်း ခိုးစားရသောအသီးပိုချိုသည်ထင့်… ဦးသောင်းဆက်ပြောသည့်အတိုင်း ရေခဲသေတ္တာပေါ် လက်ထောက်လိုက်သည်။ ဦးသောင်းဆက်လည်း တင်တင်ကို လိုးသကဲ့သို့ပင်… ကြူကြူ၏ထမိန်ကို ခါးပေါ်သို့ဆွဲလှန်တင်ပြီးပုဆိုးကို ဂွင်းလုံးပုံချွတ်ချလိုက်သည်။ ဖေါင်းဖေါင်းလေး စူထွက်နေသောစောက်ဖုတ်အတွင်းသို့… လီးကို ဖြေးညင်းစွာအဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက်လေတော့သည်။ ပြွတ်…ပျွ စ်…ပျွ စ်… “အ…အဟင်းဟင်း……” ကြူကြူသည် မိမိအဖုတ်အတွင်းသို့ လီးကြီးတိုးလာမှုကြောင့်… ။
ဖီးလ်တက်ကာ… လူနာညည်းသလို ညည်းသံထွက်သွားသည်။ ဦးသောင်းဆက်သည် တင်တင်ကိုလိုးသလို ခပ်ကြမ်းကြမ်းမလိုးပဲ… ဖီးလ်ခံ၍ဖြေးညင်းစွာ လိုးလေသည်။ “ကြူကြူ….” ” ရှင်…” လိုးလို့ကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်… ငါလေ နင့်ကိုလိုးချင်နေတာကြာလှပြီ… အခုမှပဲ အဆင်ပြေတော့တယ်…” ဦးသောင်းဆက်သည် ပြောပြောလိုးလိုးလုပ်နေသည်။ “အင်း……ဟင်းဟင်း…သမီးလဲသိနေပါတယ်ဦးရယ်.. အချိန်ကသိပ်ရတာတာ မဟုတ်နော်… သိပ်ကြာလို့ မဖြစ်ဘူးဦးရယ်…” “အေးပါကွယ်…မကြာပါဘူးကွာ… ကောင်းလိုက်တဲ့အဖုတ်… တော်တော်ကောင်းတယ်ကွာ…” “ဦးရယ်…သမီးလဲကောင်းလွန်းလို့… ပြီးချင်လာပြီနော်…” ပြောပြောဆိုဆို…ကြူကြူသည်… တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ အဖုတ်အတွင်းမှ သုတ်ရည်ထွက်ကာ… တစ်ချီပြီးမြောက်သွားချေပြီ။ အိမ်တွင်လင်ဖြစ်သူနှင့် အလိုးခံရစဉ် မလွပ်လပ်သဖြင့်… အသံမထွက်ရဲပဲ… ကြိတ်လိုးလေးသာ လိုးဖြစ်ခဲ့ကြ၏။
ယခုလို စကားတပြောပြောဖြစ်သုတ်ရည်ထွက်အောင် အလိုးမခံဘူးသဖြင့် အတွေ့အကြုံသစ်ကို နှစ်သက်သွားသည်။ အချိန်ရပါက (၃/၄)ချီလောက်တောင် ခံပစ်လိုက်ချင်သည့်စိတ်တောင် ပေါ်ပေါက်နေသည်။ ဦးသောင်းဆက်သည်လည်း ကြူကြူပြီးသွားမှန်း သိသဖြင့်… ခါးကိုမွှေ့ယမ်းကာ ကြူကြူ၏ အဖုတ်အတွင်းသားကို လီးဖြင့် ထိုးမွှေနေသည်။ ကြူကြူလည်း အလိုက်သင့်… ဖင်ကိုစကောဝိုက်ကာ… အပေးအယူ ညီမျှနေတော့သည်။ စကောဝိုက်နေသည့် ကြူကြူစောက်ဖုတ်ကို ဦးသောင်းဆက်မှ… သုတ်ရည်များ ပန်းထည့်နိုင်ရန်အတွက်… အသွင်းအထုတ်လုပ်ပြီး… ဆက်လိုးလေသည်။ နှစ်ဦးသားမှာ… ခိုးစားရသော အတွေ့အကြုံကြောင့်… သိပ်မကြာခင်မှာပင်… နှစ်ဦးသား ပြိုင်တူ… သုတ်ရည်ပြိုင်ထွက်ကာ ပြီးသွားကြလေတေ.့သည် …..ပြီးပါပြီ။